यसरी सकियो कांग्रेसका तीन नेता र माओवादीका एक नेताको राजनीतिक भविष्य ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > यसरी सकियो कांग्रेसका तीन नेता र माओवादीका एक नेताको राजनीतिक भविष्य !
यसरी सकियो कांग्रेसका तीन नेता र माओवादीका एक नेताको राजनीतिक भविष्य !
काठमाण्डौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
३० चैत २०७३, नयाँ पत्रिका, ७।००
२०७३ चैत्र ३० गते ०८:२८ मा प्रकाशित
मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो नयाँ वर्षमा हेर्नुस् कम्पनीले दिने छुट
पेट्रोलियमको आयात ६१ प्रतिशतले घट्यो, ४ महिनामा साढे १ अर्वको भित्रियो